Oke Osimiri Yellow: njirimara, mbido, ụdị ndụ dị iche iche na akụnụba | Network Meteorology
A maara akụkụ ugwu nke Osimiri East China odo odo. Ọ bụ oke osimiri buru ibu nke nwere ebe ihe dịka 417 km². Ọ dị n’etiti China na peninshula Korea. Aha ahụ sitere na aja aja nke na-enye mmiri agba nke yiri odo. Ọ bụ osimiri na-acha odo odo nke na-elekọta nri nke oké osimiri a ma nye ya agba a. Osimiri edo edo ka amara dị ka Huang he. A makwaara ya n'ime obodo, na South Korea, dị ka West Sea.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, mbido na mmalite nke Osimiri Yellow na osimiri ya.
2 Mmanụ na Oké Osimiri Yellow
3 Isi ụtụ isi nke Osimiri Yellow
4 Ọzụzụ na ihe dị iche iche dị ndụ
Oké Osimiri Yellow bụ oke osimiri na-emighị emi nke naanị nwere ihe kachasị omimi nke mita 105. Ọ nwere nnukwu ọnụ mmiri nke na-etolite ala ala nke mmiri a na-akpọ Oké Osimiri Bohai. Osimiri a bụ Osimiri Yellow. Osimiri Yellow bụ isi iyi nke mmiri mmiri. Osimiri a bupụrụ mgbe ọ gafere ógbè Shandong na isi obodo ya, Jinan, yana Osimiri Hai nke gafere Beijing na Tianjin.
Aha oke osimiri a esiteghi n'osimiri, kama o sitere na oke nke quartz sand sand nke oburu na-eburu ya na mmiri ma nye ya ihe a na agba. Nke a bụ ihe kpatara ya ji nwee aha Osimiri Yellow. Ọ bụ oké osimiri bara ụba na algae mmiri, cephalopods na crustaceans. Tumadi anyị nwere ike ịhụ ụdị algae site na-acha akwụkwọ ndụ-acha anụnụ anụnụ nke na-ebilite tumadi n'oge ọkọchị yana nke ahụ na-enyekwa aka na agba nke mmiri. N'ịbụ nke na-emighị emi, ụcha algae na-ekpebi agba ọ ga-enwe site n'ọhụhụ izugbe.
Mmanụ na Oké Osimiri Yellow
N’afọ 2007 enwere ụlọ ọrụ China Oil and Gas Corporation, CNPC. Ma ọ bụ na otu ọdụ mmanụ dị oke mkpa dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri tọn. Achoputara ihe a ma n’otu ụsọ oké osimiri na n’elu kọntinent nke Oke Osimiri Yellow. Ọ dị na mpaghara Hebei ma nwee mpaghara gbatịrị kilomita 1570. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmanụ a niile dị n'elu ikpo okwu n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Animaldị anụmanụ na osisi na-aba ụba ka anyị na-eru nso na ndịda nke oké osimiri. Nke a bụ ebe anyị na-ahụkwa ọtụtụ azụ ka ukwuu. N'ime afọ iri gara aga, North Korea nọ na-arụ ọrụ ụgbọ agha nuklia dị iche iche n'akụkụ ụsọ Oké Osimiri Yellow. Maka nke a, UN akwadola ya, agbanyeghị na o yighị ka ọ metụtara obodo Kọmunist a.
Isi ụtụ isi nke Osimiri Yellow
Anyị maara na Osimiri Yellow na-eri osimiri a. Ọ bụ ogologo ogologo nke mmiri ọhụrụ a na-ewerekarị dị ka oghere nke mmepeanya ndị China. Ọ bụ osimiri nke abụọ kachasị ogologo na China niile, bụrụ osimiri nke atọ kachasị ogologo na Asia na nke isii kachasị ogologo n'ụwa niile. Amaara ya site na aha a maka oke mmiri nke o bugara na Osimiri Yellow ma nye ya agba a.
Njikọ na ugwu nke Bayan Har na ala dị larịị nke Tibet na elu nke mita 4.800. Ọ na-aga n'ụzọ na-adịghị agbanwe agbanwe na ụzọ ọwụwa anyanwụ site na mpaghara 9 China ruo mgbe ọ ga-agba n'ime Osimiri Yellow. N ’ebe a ọ na - ewepụta delta dị oke mkpa na - eme ka amara ya nke ọma.
Ogologo ogologo nke osimiri ahụ bụ 5,464 kilomita, mmiri mmiri ya dị ihe dị ka 750,000-752,000 km2. Ọ na-ewepụkarị ọfụfụ n'oké osimiri nke cubic 2.571 cubic kilomita kwa nkeji. Nke a bụ ọdọ mmiri ya, nke bụ nke atọ kachasị na China. Ọtụtụ osimiri dị mkpụmkpụ na-enye mmiri n'osimiri a na-aga n'ihu n'ihu. Ọ bụrụ na anyị nyochaa usoro ahụ dum, anyị ga-ahụ na o nwere akụkụ 3: nke kachasị elu, nke etiti na nke obere.
Akụkụ mbụ nke usoro ya malitere na ugwu ruo Togtoh County, site na ihe karịrị 3,400 kilomita. Ọ bụ ebe a ka nrịgo ya kpụ ọkụ n'ọnụ na ebe amụrụ ya malitere. Usoro dị n'etiti na-esi na ógbè ahụ gaa Zhengzhou, na mpaghara Henan. Ọ bụ na nkebi a ebe nke ugbu a na-ewe ihe karịrị 90 percent nke sedimenti. Sediments bụ foduru nke ájá na nkume nke a na-akwaga ma na-ebugharị ma site na ndozi na flotation na mgbasa. N'ikpeazụ, ụzọ dị ala na-amalite site na Zhengzhou wee kwụsị n'oké osimiri. Ugbua n'akụkụ nke a nke oké osimiri bụ ebe a na-ejikwa ihe kachasị ukwuu nke sedimenti.
Ọzụzụ na ihe dị iche iche dị ndụ
Osimiri ahụ na-enweta agba aja aja na-acha odo odo ka ọ na-aga n'etiti ụlọ ọrụ nke ọtụtụ ihe siri ike nwere agba a. Akụkụ nke ala nke ugwu Tibet ebe osimiri ahụ malitere ito bụ nke nwere ike ịdaba na mbuze site na ikuku ma na-ekpochapụ ájá niile dị mma n'ime osimiri. Ọ bụrụ na ebujuru akụkụ ahụ na agba a, a na-ebu ha ma na-echekwa mmiri na Osimiri Yellow.
Ọ bụ osimiri na-enweghị ọgaranya n'ụba, yabụ oke osimiri abaghị ọgaranya. Oké osimiri, ebe ọ bụ na ọ dị omimi, enweghị ike ibute ọtụtụ ahịhịa na ahịhịa. Fọdụ anụmanụ kacha mara amara bụ Yangtze ngaji na ụdị ụfọdụ nke kapeeti. A na-eme atụmatụ na ha nwere ike ịchọta ha na mkpokọta ihe dịka ụdị azụ 150 mana ọnụọgụ pere mpe taa. N'ime ọdọ mmiri ahụ, e nwere ọtụtụ ụdị anụmanụ ndị na-enye ara dị ka agụ na sica deer.
N'ime nnụnụ ndị kacha mara amara anyị nwere Nnukwu Nnukwu, Chinese Serreta na European Eagle. Osimiri a ka eweputa ume mmiri ma mee ka akuku a dum na-aga n’ihu. Otú ahụ ka ọ dịkwa banyere ịkọ ahịhịa na ịkọ azụ na ụfọdụ anụmanụ mmiri. Ọ bụ otu n'ime ọrụ akụ na ụba kachasị mkpa na ewepu mmanụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Yellow na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Uhie
A pụrụ ịchịkwa ihe otiti igurube?